आध्यात्मिक नक्सा र कम्पास
पोस्ट गरिएका मे 13, 2021 द्वारा Jeremiahtwo भित्र Apologetics
रोमी राज्यपाल पिलातसले यहूदियाको न्यायपरिषद् उहाँको अगाडि उभिरहेका धेरै व्यक्तिहरूको अनुहारको अध्ययन गरेका थिए। यस व्यक्तिको अनुहारको बारेमा केही फरक थियो। बाहिर, भीडले उसको मृत्युको लागि कराइरहेको थियो, तर उसको आँखामा कुनै डर थिएन। पिलातस एक कडा अपराधीको अनुहारसँग परिचित थिए, र उनको अगाडि उभिरहेको मानिस पक्कै पनि उनी मध्ये एक थिएन। उनको महान असरदार र शान्त कोमल टकटकीले न्यायीक अधिकारीलाई रुचायो। उनले यस संसारभन्दा परको एउटा राज्यको कुरा गर त्यो राज्य जुन राजनीति, विजय र युद्ध बाहिरको थियो। उनलाई यहूदीहरूको लामो आशा गरिएको मसीहको शीर्षक अन्तर्गत रोमी सरकारको विरुद्ध षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाइएको पनि उनी मध्ये एक थिएन। उनको महान असरदार र शान्त कोमल टकटकीले न्यायीक अधिकारीलाई रुचायो। उनले यस संसारभन्दा परको एउटा राज्यको कुरा गरे - त्यो राज्य जुन राजनीति, विजय र युद्ध बाहिरको थियो। उनलाई यहूदीहरूको लामो आशा गरिएको मसीहको शीर्षक अन्तर्गत रोमी सरकारको विरुद्ध षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाइएको थियो।
मृत सागर पाण्डुलिपिहरू, १९४६ पछि फेला परेका सबै भन्दा पुरानो करार समावेश गर्दछ र कम्तिमा ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीमामिति दिइन्छ। ती भविष्यवाणीहरू येशू आउनुभन्दा कम्तीमा दुई सय वर्ष अगाडि नै गरिएको थियो भनेर तिनीहरूलेप्रमाणितगर्छन्। इतिहासमा कुनै पनि व्यक्ति सम्भाव्यताको यस स्तरले समर्थन गरेको छैन। र कुनै अन्य पुस्तकले भविष्यको भविष्यवाणीलाई बाइबलको रूपमा विस्तारको स्तर दावी गर्न सक्दैन। यस प्रकारको शुद्धता छुट पाउन गाह्रो छ जबसम्म पक्कै हामी राजनीतिज्ञले तथ्यलाई बिगार्ने अभ्यास गर्दैनौं किनभने ती हामीलाई मिल्दैन। म तपाईंलाई यसको भविष्यवाणीहरु को माध्यम बाट बाइबलको सत्यता जाँच्न आमन्त्रित गर्दछ, विशेष गरी येशूको व्यक्तिको बारेमा। यदि तपाईंसँग यूट्यूबमा पहुँच छ भने यस प्रस्तुतिमा एक नजर राख्नुहोस्, “येशूको भविष्यवाणी। अर्को मान्छे? " डा. वाल्टर भेथ द्वारा। मसीह सम्बन्धी भएका भविष्यवाणीहरूको सत्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यसले हामीलाई बताउनुहुने कुरालाई संकेत गर्दछ। र बाइबलमा उहाँ बारे बताइएको कुरा ध्यान दिएर योग्य छ। हामीले अहिले सम्म पत्ता लगाएका स्रोत र च्यानलका सिद्धान्तहरूको साथ, आउनुहोस् अब हामी बाइबललाई हेर्नेछौं कि यसले हामीलाई जीवनको यो नमुना कसरी वर्णन गर्छ। ५. ईश्वरीय ढाँचा पिलातसले येशूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेका थिए।"सत्य के हो?" यदि उसले जवाफको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो भने उसले यी शब्दहरू प्राप्त गरेको हुन सक्छ।“म बाटो, सत्य र जीवन हुँ। कोही पितामा आउँदैन, केवल मद्वारा मात्र।” यूहन्ना १४:६। येशूले आफ्नो पितासँगको सम्बन्धमा सत्य कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँ पितातिरको लागि बाटो हो। अर्को ठाउँमा आफ्ना अनुयायीहरूसँग कुरा गर्दा येशूले चेलाहरूलाई सोध्नुभयो,
उहाँले तिनीहरूलाई सोध्‍नुभयो, “तिमीहरू के भन्‍छौ, म को हुँ?” (१६)सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, “तपाईं ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ, जीवित परमेश्‍वरको पुत्र।” (१७)येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्‍य हौ। किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्‍वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। मत्ती १६:१५­–१७
पिलातसको प्रश्नको उत्तर यो थियो कि येशू सत्य हुनुहुन्छ, र यस सत्यको केन्द्रबिन्दु यो थियो कि येशू पिता हुनुहुन्थ्यो। यो ईश्वरीय ढाँचाको सत्यता हो, र कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पहिलो पत्रमा पावलले हाम्रो लागि यो नमुनालाई परिभाषित गरेका छन्। तर हाम्रा निम्‍ति त एउटै परमेश्‍वर पिता हुनुहुन्‍छ, जसबाट सबै थोक हुन आए, अनि उहाँकै निम्‍ति हामी जिउँदछौं— हाम्रा निम्‍ति एउटै प्रभु, येशू ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ, जसद्वारा सबै कुरा हुन आए, र जसद्वारा हामी जिउँदछौं। कोरिन्थी ८:६